Safal Khabar - परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली अब ओलीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बन्दै
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली अब ओलीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बन्दै
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ब्यापक हेरफेर हुदैं, परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई मन्त्रीवाट झिेकर प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बनाइदैं
आइतबार, २४ कार्तिक २०७६, ०८ : ११
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ शिराबाट सरकार सञ्चालनको तयारी गरेका छन् । आफ्नै सचिवालय देखि क्याविनेट सम्म नयाँ ढंगले रिफर्म गरी ओली नयाँ शिराबाट सरकारको नेतृत्व गर्न तयार देखिएका छन् ।
पार्टीभित्र र बाहिर सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने आलोचनाबाट बच्न् र पार्टीभित्रै पनि सरकार र पार्टी नेतृत्वमध्ये एकमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकारी जिम्मा दिन बढ्न थालेको दबावलाई कम गर्न ओलीले नयाँ राजनीतिक कोर्स अगाडी सार्न खोजेका हुन् ।
त्यसका लागि आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्री आफ्नै सचिवालय देखि क्याविनेटसम्म हेरफेरका लागि तयार छन् भन्ने सन्देश उनले अहिले दिन खोजेका छन् । त्यही क्रममा उनले मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालमार्फत सचिवालयका सबै सदस्यलाई आफ्नो सहजताका लागि राजीनामा दिन आग्रह गरेका हुन् ।
ओलीको त्यस्तो आग्रहपछि सचिवालयमा रहेका मुख्य सल्लाहकार रिमाल, परराष्ट सल्लाहकार राजन भटटराई, प्रेस सल्लाहकार डा कुन्दन अर्याल लगायत १३ जनाले सामुहिक रुपमा राजीनामा बुझाईसकेका छन् । अत्यन्त गोप्य राखिएको त्यस्तो राजीनामा प्रधानमन्त्रीको सहजताका लागि मंसिर १ गते बाट लागु हुने गरी उनीहरुले बुझाएका हुन् ।
तर सचिवालयका कुनै सदस्यले पनि यस बारेमा मुख खोलेका छैनन । उनीहरुले अहिले सार्वजनिक रुपमा यत्तिमात्र भनेका छन्, – यो विषयमा आफुलाई जानकारी भएन, एक दुई दिनमा थाहा होला नी !
प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले भने,– ‘अगुल्टो नझोसी आगो बल्दैन । प्रधानमन्त्रीले अगुल्टो झोस्न खोज्नुभएको छ, आगो बाल्नका लागि । यसलाई त्यही रुपमा बुझौं न ।’
ओलीले आफुलाई विरामी भएको ले सक्रिय हुन सक्दैनन अब भन्ने पार्टी नेताहरुलाई आफु अझै नयाँ शिराबाट सक्रिय भएर अगाडी बढ्न चाहेको सन्देश दिन चाहिरहेका छन् । खासगरी सरकारको नेतृत्व छोडन बढ्न सक्ने दवावलाई नयाँ ढंगले ओलीले सेटलमेन्ट चाहेका छन् । त्यही भएर पनि उनले अहिले सचिवालयबाटै नयाँ सहजताको खोजी गरेका हुन् ।
स्रोतका अुनसार सचिवालय सँगसँगै ओली मन्त्रिपरिषद् पनि पूर्नगठन गर्ने तयारीमा लागेका छन् ।
धेरैलाई लागेको छ, प्रधानमन्त्रीले आफनो सचिवालयका सदस्यहरुको कार्यशैलीगत समस्याका कारण उनीहरुलाई हटाउन खोजिएको हो । तर त्यसो होइन । प्रधानमन्त्री निकट उच्च स्रोतका अनुसार, ओलीले पार्टी र सरकारमा अझै आफु सक्रिय रह्ने र नयाँ जोश र जाँगरका साथ काम गर्न चाहेको सन्देश उनले आफ्नै सचिवालयका सदस्यसम्मलाई हेरफेर गरेर दिन खोजेका हुन् ।
ओलीले सचिवालयका केहीलाई पूनः नयाँ शिरावाट दोहो¥याउने र केहीलाई नयाँ नियुक्ति दिएर पठाउने तयारी गरेका छन् । त्यसमध्ये प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई अमेरिकाको राजदुत बनाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली देखिएका छन् ।
अमेरिकामा अहिले अर्जुनबहादुर कार्की राजदुत छन् । त्यहाँको राजदुत नियुक्ति प्रधानमन्त्री ओलीले यस अगाडी रोकेर राखेका थिए ।
ओली निकट उच्च स्रोतले भन्यो, प्रधानमन्त्रीले रिमाललाई त्यहाँ पठाउन चाहेका छन् ।
ओलीले गत भदौंमै मन्त्रिपरिषद पूर्नगठनको तयारी गरेका थिए । सिंगापुर उपचारभ्रमणबाट फर्केलगत्तै उनी मन्त्रिपरिषद् पूर्नगठन गर्न चाहिरहेका थिए । तर यो विषय उनले आकस्मिकताका आधारमा गर्न चाहिरहेका थिए । उनको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको योजना सञ्चारमाध्यममा लिक भएपछि उनी केही समय मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न अडिएका थिए ।
तर अब सचिवालयका सदस्य फेर्ने योजना भित्रमार्फत उनले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको संकेत गरेका हुन् ।
अब मन्त्रिपरिषद् हेरेफेर गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली देखिएका छन् ।
त्यसो हुदा उनले अहिलेका परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई मन्त्रीबाट झिकेर आफनो सचिवालयको मुख्य सल्लाहकार बनाउन चाहेका छन् । रिमाललाई हटाएपछि त्यो स्थानमा आफनै पूर्ववत समुहका योग्य र सहयोगी मान्छे ल्याउनु पर्ने वाध्यतामा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । त्यसका लागि ज्ञवाली उपयुक्त पात्र देखिएका छन् ।
ज्ञवालीले एक हप्ता अगाडी मात्रै आफनो मन्त्रालयका सबै कर्मचारीलाई गोदावरीमा वनभोज आयोजना गरी आफुलाई सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिईसकेका थिए ।
त्यस्तै उनले त्यसको दुई दिनपछि सम्पादकहरुलाई बोलाई आफुले परराष्टमा गरेको अहिलेसम्मका कामको बारेमा विफ्रिङ गरेका थिए ।
आखिर ज्ञवालीले मन्त्रालयका सबै कर्मचारीलाई बोलाएर विदाई हुन लागेको मन्त्रीले जसरी किन धन्यवाद दिए र सम्पादकलाई बोलाई आफनो कामका बारेमा विफ्रिङ गरे ? त्यही बेला देखि धेरैमा जिज्ञासा थियो ।
तर अहिले उनलाई परराष्टबाट झिेकर प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकार बनाइन लागेको चर्चा नेकपाभित्र चलेको छ । ज्ञवाली बाहेक पूर्व परराष्टमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेको नाम पनि अहिले अब बन्ने मुख्य सल्लाहकारको रुपमा चर्चामा छ ।
ओलीले राजेश वधाचार्य र चेतन अधिकारीलाई भने पूनः सचिवालयमै नयाँ टिममा नियुक्ति गर्ने सम्भावना छ । अन्यलाई भने उनले अहिले विदाई गर्ने तयारी गरेका छन् ।
गोकुल प्रकरणः ओली र प्रचण्डबीच चर्काचर्की
सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी कमिसन विवादमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि पार्टीले...
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण दुईदेखि...